Fanombohan’ny fanafihana – Dahalo 11 lavon’ny tafika manokana any Atsimo - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fanombohan’ny fanafihana – Dahalo 11 lavon’ny tafika manokana any Atsimo
Tanàna roa : Ankarampotsy sy Andranovory, samy ao amin’ny kaominina Ambanivohitr’i Eloty, any amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo no nanombohan’ireo vondron-tafika manokana, nalefa hihaza ireo dahalo, ny fanafihan’izy ireo, omaly alatsinainy.
Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny minisiteran’ny Fifandraisana dia “dahalo 11 no maty tamin’izany”. Andian-dahalo manodidina ny 70 voalaza fa anisan’ny mpiara-dia amin-dRemenabila no nambaran’ny loharanom-baovao fa tao amin’ireo tanàna ireo, izay voalaza ihany koa fa efa avy nonenan-dRemenabila.
Ny fampitam-baovao avy amin’ny minisiteran’ny Fifandraisana ihany no nitatitra fa “nizara roa ireo andian-tafika ka ny iray notarihan’ny kolonely Lylison de René no nanafika tao Andranovory raha ny andian-tafika avy amin’ny CFS (Commandement des Formations Spécialisées), notarihin’ny lietnà- kolonely Marolia kosa no nitarika ny fanafihana tao Ankarampotsy».
Nampiasaina hatramin’ny helikoptera tamin’ity fanafihana ity izay naharitra ora iray mahery. “Dahalo iray no maty tao Ankarampotsy ary 10 kosa no voatifitry ny mpitandro filaminana tao Andranovory”, hoy ihany ny fampitam-baovao ofisialy.
Manamboninahitra iray any Betroka no nanamafy fa “tsy nitsitsy tamin’ny fitifirana ireo mpitandro ny filaminana noho ireo dahalo namaly tifitra ihany koa”. “Nampiasaina hatramin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny lance-roquette”, hoy ihany ity farany.
Bokin’omby marobe efa misy fitombokase nefa tsy mbola misy anaran’omby miampy kara-panondro tsy mbola misy anarana ihany koa no anisan’ny hita tao amin’ilay tanàna niaraka tamin’ny basim-borona sy »kalacknikov » 1, raha ny voalazan’ny tatitra ofisialy hatrany.
Isan’andro dia misy olona voasambotra hatrany any Betroka, raha ny voalazan’ny loharanom-baovao any an-toerana. Olona am-polony no efa voasambotra ary voarohirohy ho miray tendro amin-dRemenabila. Ny roa tamin’ireo no nosamborina omaly tao Betroka.
Mikasika an’Itokanono sy Ednat Georgial, ilay lehilahy 38 taona nosamborina tany Midongy Atsimo ny zoma teo, izay voalaza fa tanan-kavanan-dRemenabila dia fantatra fa anio izy ireo no kasaina hatolotra ny Fitsarana ao Betroka.
«Nitantara ny fanafihana maro niarahany tamin-dRemenabila izy tamin’ny famotorana natao taminy. Maro tamin’ireo zavatra notantarainy no nifandray tamin’ny fakana am-bavany an’ireo olona hafa efa natao famotorana teto aminay», hoy ny filazan’ireo mpanao famotorana any Betroka.
Mpanoratra Rijakely, 25.09.2012, 08:28	FIARAHAMONINA